DAAWO: Shiinaha oo dhistay garoonka ugu wayn adduunka! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DAAWO: Shiinaha oo dhistay garoonka ugu wayn adduunka!
DAAWO: Shiinaha oo dhistay garoonka ugu wayn adduunka!
(Beijing) 16 Abriil 2019 – Waxaa heer geba gebo ah ku dhow garoonka diyaaradaha ugu weyn Adduunka oo Shiinuhu ka dhisanayo Koonfurta magaallada Beijing, iyadoo garoonkaasi uu noqon doono kan ugu shaqada badan marka la eego dadka safarka ah.
Garoonkan cusub waxaa baaxaddiisu ay gaaraysaa 1 Milyan oo laba jibbaaran, iyadoo dhismihiisa la billaabay sanadkii 2016, waxaana la dhameyn doonaa bisha June 2019, halka shaqadiisa ganacsina uu toos u billaabi doono isla Sebtember ee sanadkan.
Waxaa Diyaariyay: Yaxye Yuusuf
Previous articleDF oo aad diiradda u saaraysa xasilinta amaanka Muqdisho (Kulan muhim ah oo dhacay)
Next article”DF si cadaalad ah wax uma maamulin!” – HirShabeelle oo qaadacay shir ay qabatay DF (War Saxaafadeed)